Nagu saabsan - Hebei Weaver Textile Co., Ltd.
Ka go'an farsamaynta dharka iyo iibinta.
Waxaa la aasaasay ilaa 1996. Wax soosaarkeena ugu muhiimsan waa noocyo kala duwan oo koofiyado iyo xargaha.Waxaana la balaariyay meheradda, waxaan dhisnay 3 warshadood oo koofiyad ah iyo 3 wershadood oo dun ah.
Shirkaddu waxay isticmaashaa nidaamyo naqshadeysan oo casri ah iyo isticmaalka maareynta nidaamka maaraynta tayada caalamiga ah ee ISO9002 2000.
Hadda mashiinnadayadu dhammaantood waxay ku jiraan heer sare oo heer sare ah.Waxyaabo dhowr ah oo wadashaqeyn ah, badeecadeenna waxaa loo dhoofiyaa dalal badan oo shisheeye iyo gobollo, sida: Mareykanka, Kanada, Spain, Turkiga, Boqortooyada Ingiriiska, Netherlands, Finland, Australia, Koonfurta Afrika, Kuuriyada Koofureed, Isutagga Imaaraatka Carabta, Fiyatnaam, Brazil, Malaysia, Hindiya, Thailand, Marooko, Bangaladheesh, Guatemala, Itoobiya. Hada warshadeena waxay layeelatay xiriiro wada shaqeyn oo waqti dheer ah ganacsato shisheeye.
Waxaan soo saarnay badeecooyin kala duwan oo soo maray heerarka nidaamka maaraynta tayada caalamiga ah ee ISO9002 2000.
Waxaan nahay shirkad u heellan sameynta iskaashi muddo-dheer ah oo lala yeelanayo macaamiisha adduunka.
Hadafkeenu waa inaan noqono ishaada ugu weyn ee koofiyadaha dharka kala duwan, miiqyada tolida polyester, dunta xargaha dunta xargaha iyo koofiyadaha gawaarida waaweyn.
Waxaan hirgelinay heerar adag oo lagu xakameynayo tayada si loo hubiyo in macaamiisheenna Waqooyiga Ameerika iyo Yurub ay ka heli karaan alaab tayo sare leh suuqa adduunka ee sida dhaqsaha isu beddelaya.
Waxaan rajeyneynaa inaan la shaqeyno saaxiibbada ganacsiga gudaha iyo dibaddaba oo aan abuurno mustaqbal wanaagsan!